किन कलेजी रङ्गको देखियो म्यासेञ्जर? « Khoj Raftar
किन कलेजी रङ्गको देखियो म्यासेञ्जर?
१५ कात्तिक । यदि तपाईंले भर्खरै फेसबुक म्यासेञ्जर एप अपडेट गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन भएको अवश्य महसुस गर्नु भएकै होला । फेसबुकले निलो र सेतो कलरमा रहेको यस अघिको लोगोमा केही नयाँ कलर थपेको छ ।